ထောပတ်သီးကြိုက်တက်ရင်တော့ ဒါလေးတွေ မဖြစ်မနေသိထားပါ
January 31, 2022 sonsonlinlin 0
ထောပတ်သီးကြိုက်တက်ရင်တော့ ဒါလေးတွေ မဖြစ်မနေသိထားပါ ထောပတ်သီးကို… အနာကင်းစွာမှည့်ရန်နှင့် မှည့်နေသောထောပတ်သီးများအား ထားသိုနည်း ၁။ ရေ လုံးဝ ( လုံးဝ ) မထိပါနဲ့ ဒါထောပတ်သီးစားသူတိုင်း သိထားရမဲ့အချက်ပါနော် ( ရလေုံးဝမထိရပါဘူး။) အညှာထဲရေဝင်ရင် အမျှင်မဲတွေပေါ်လာပြီး ပုတ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဘုရားကပ်မယ်။ လက်ဆောင်ပေးမှာမို့ လှချင်တယ်ဆိုရင်တော့ tissue အစိုနဲ့သုတ်ပြီး။ အဝတ်ခြောက်ဖြင့်သေချာစွာ သုပ်ပေးပါရှင့်။ သူ့အရောင်အလိုလိုတက်လာပါမယ်။ တချို့ရောင်းတန်းတွေမှာ အသီးကိုပြောင်လက်နေအောင် သုတ်ထားတာက အသီးအမှည့်နားက အသားနဲ့ပြန်သုတ်တာပါ။ […]
ဝက်ခြံ တင်းတိတ် အမာရွတ်နဲ့ အဆီဖုတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရရင်
ဝက်ခြံ တင်းတိတ် အမာရွတ်နဲ့ အဆီဖုတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရရင် Hello မလှချင်တို့ရေ ဒီကမလှချင်နဲ့ အတူတူ လိုက်လုပ်ရအောင် သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ပီးရင် အတူတူလှကြတာပေါ​့ It’s skin care time!!! ဒီတစ်ပတ်တော့ အမေးများနေတဲ့ မေးခွန်းတွေ ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ တင်းတိပ်တွေ ထွက်နေတယ် ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ ရှိနေတယ် အဆီဖုတွေ ဖြစ်နေတယ် အမဲစက်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေ ရတယ် ဘာလုပ်ရမလဲ??? အကြံဉာဏ်ပေးပါဦး တင်ပေးပါဦး ဆိုသူတွေအတွက် […]
သင်ကံေကာင်း ချင်တယ်ဆိုရင် ကျင့်ကြံနေထိုင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်း (၇) မျိုး
ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲကိုယ့်စိတ်ကို နှစ်ထားပါ သင့်မှာရှိတာ ပစ္စုပ္ပန်တခုထဲဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ အတိတ်ဆိုတာ ပြီးသွားပြီ … ။ အနာဂတ်ဆိုတာ မရေရာတာတွေနဲ့ မရောက်လာသေးပါဘူး …. ။ သင့်လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မှ သင့်ဘဝကို ပြောင်း လဲနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ။ 2. Show kindness တပါးသူကို မေတ္တာထားပါ အများအကျိုးရှိမှာလုပ်ပါ …. ။ ကိုယ်တယော က်ထဲ ကောင်းစားသွားမယ့် လမ်းမရွေးပါနဲ့ … […]
ညဘက် အချိန်မှန်မအိပ်သူများ တွေ့ကြုံရမည့် ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးများ
ညဘက် အချိန်မှန်မအိပ်သူများ တွေ့ကြုံရမည့် ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးများ အိပ်ယာဝင်ချိန် နောက်ကျတာက တကယ်ကို မကောင်းပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသားအရေလှပမှု၊ ခန္တာကိုယ်ပြည့်ဖြိုးမှု၊ အရပ်ရှည်မှု၊ စိတ်ကြည်လင်မှု စတဲ့ အရာများစွာဟာ ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ချိန်နဲ့ အဓိကသက်ဆိုင်ပါတယ်။ အိပ်ချိန် အနည်းဆုံး ၇ နာရီ ရှိမှသာ ကျန်းမာရေးအတွက် သာမက အလှအပအတွက်ပါ အကျိုးရှိမှာပါ။ ဒီနေရာမှာသိထားဖို့က အိပ်ချိန် ၇ နာရီပြည့်ဖို့ဆိုပြီး ည ၁ နာရီအိပ်၊ မနက် […]
အရေးအကြောင်းများကို ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သည့် အိမ်တွင်းကုထုံးနည်းလမ်းများ
အရေးအကြောင်းများကို ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သည့် အိမ်တွင်းကုထုံးနည်းလမ်းများ အရေးကြောင်းတွေ ထင်လာတာကြောင့် စိတ်ညစ်နေသူတွေ အတွက် မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းတွေနဲ့ မိမိဘာသာ အိမ်တွင်း ပြုပြင်နိုင်မယ့် အလွယ်နည်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကြက်ဥအကာ၊ ဘဲဥအကာ ကြက်ဥအကာ၊ ဘဲဥအကာမှာ ဗီတာမင်ဘီအုပ်စု ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားကို တင်းရင်းစေပြီး အရေးကြောင်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥအကာ နှစ်လုံးကို မွှေပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ် လိမ်းကာ မိနစ် ၃၀ လောက် ထားပေးပါ။ ပြီးရင် […]
အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူနေရတဲ့အကြောင်းအရင်း (၆) ချက်
အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူနေရတဲ့အကြောင်းအရင်း (၆) ချက် သင်ဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဘာလို့ဆံပင်ဖြူနေရတာလဲ ဆိုပြီး တွေးမိကောင်း တွေးမိပါလိမ့်မယ်။ ဆံပင်အရောင် ပြောင်းလဲလာခြင်းက နှစ်သက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း ဒါဟာနောက်ထပ် အခြေအနေအတွက် လက္ခဏာတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ဒါဆိုရင် လူငယ်တွေ ဘာလို့ ဆံပင်တွေ လွယ်လွယ်ဖြူရတာလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁။ Vitamin B12 ချို့တဲ့ခြင်း ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အဆိုအရ Vitamin B12 ချို့တဲ့တာဟာ ဆံပင်အရောင် ပြောင်းစေတယ်လို့ […]
ဖတ်ရင်း မျက်ရည်ကျမိတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော် နှစ်ပွဲကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ
ဖတ်ရင်း မျက်ရည်ကျမိတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော် နှစ်ပွဲကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ ရေးသားသူ – ကိုစိုးထိုက် (ဖဒို) ”ဆရာ့ ဆိုင်လေး ပြီးတော့မယ်နော်..”လို့ ကိုသာဖေက ကျွန်တော့်ကို ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ လာနှုတ်ဆက်တယ်။ မကြာခင်ဖွင့်တော့မယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ စားသောက်ဆိုင် ရှေ့တည့်တည့်မှာ ကိုသာဖေတို့ အိမ်ရှိပါတယ်။ အိမ်ဆိုပေမယ့် လေးတိုင်စင်ပေါ်မှာ တောင်ထန်းကျဲကျဲ မိုးထားတဲ့ ခနော်ခနဲ့ တဲလေး တစ်လုံးပါပဲ။ ဆယ်ပေပတ်လည်ဝန်းကျင် အဲဒီတဲလေးထဲမှာ ကိုသာဖေရယ် ၊ အမြဲတမ်းဖျားနေတတ်တဲ့ သူ့မိန်းမရယ် […]
ပိုက်ဆံတစ်ကျပ်မှ မရှိဘဲ စတင်လုပ်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း (၆) မျိုး…
ပိုက်ဆံတစ်ကျပ်မှ မရှိဘဲ စတင်လုပ်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း (၆) မျိုး… တကယ်တော့ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ မူပိုင်ရောင်းကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် ထွန်းကားနေတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဖုန်းတစ်လုံး ရှိရုံနဲ့ကုမ္ပဏီထောင်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။တစ်ချိန်က American Dream ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းဟာ စီးပွားရေးအသို က်အမြုံကောင်းတစ်ခုကို ရွှေတွင်းတူးသလို တူးချင်တဲ့ လူတွေအတွက် မျှော်လင့် ချက်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သန်းနဲ့ချီတဲ့ အမေရိကန်တွေ ချမ်း သာကြွယ်ဝခြင်းဟာ ရွှေတွင်း၊ ငွေတွင်းတွေ တူးမိလို့ချမ်းသာခဲ့တာ […]
သင် ဒီနိမိတ်တွေမြင်ရင် သင်ကံကောင်းပြီလို့ မှတ်လိုက်ပါတော့
သင်ဒီနိမိတ်တွေမြင်ရင် သင်ကံကောင်းပြီလို့ မှတ်လိုက်ပါတော့ (၁)အိမ်ထဲခြံထဲကိုကြောင်တစ်ကောင်ဝင်လာရင်သတိထားကြည့်ပါကြောင်နက်ဆိုရင်ဒါဟာသစ္စာဖောက်ယုံကြည်မှု အလွဲသုံးခံရမယ့်နိမိတ်ဖြစ်ပြီးကြောင်ဖြူဆိုရင်အိမ်သားတစ်ယောက်ယောက်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်မယ့်နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ကြောင်ဝါရွှေဝါရောင် ကြောင်မျိုး ဝင်လာရင်တော့ကံကောင်းတော့မယ့်နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ် ကြောင်ဟာ ဟိုးတုန်းက ဂမ္ဘီရအတတ်ပညာနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ သတ္တဝါမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ (၂)သွားရင်းလာရင်း လမ်းမှာ မြွေနဲ့ တည့်တည့်တိုးသူတွေ ရှိကြမှာပါ။မြွေကိုမြင်ရတာဟာကိုယ့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးအရေးပါတဲ့အဖြစ်အပျက်(သို့)လူတစ်ယောက်ပေါ်လာမှာကို နိမိတ်ပြတာပါပဲအဆိပ်ပြင်းတဲ့မြွေဖြစ်လေကံပိုကောင်းလေလို့လည်းအဆိုရှိပါတယ် မြန်မာ့ဗေဒင်ပညာမှာတော့အမျိုးသားဆိုကိုယ့်လက်ဝဲကနေမြွေဖြတ်ရင်ကံကောင်းစေတတ်ပြီးအမျိုးသမီးဆိုရင်တော့ကိုယ့်လက်ယာကဖြတ်ရင် ကံကောင်းတယ်လို့အကြမ်းဖျဉ်းသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မြွေကိုမသတ်ဘဲလွှတ်ပေးလိုက်သင့်ပါတယ်(၃)ကိုယ့်အတွက်နေ့ကောင်းရက်သာလို့သတ်မှတ်တဲ့ နေ့(သို့)ရက်ရာဇာတစ်ရက်မှာတစ်စုံတစ်ယောက်က မုန့်ဖိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကြွေးပြန်ပေးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေးလာခဲ့ရင်အဲဒီငွေကိုသိမ်းထားတာပါအဲဒီငွေဟာကံကောင်းပျော်ရွှင်စေမယ့်လာဘ်ငွေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အတွက်နေ့ကောင်းရက်သာမျိုးသတ်မှတ်မထားရင်လဆန်း (၁)ရက်ဒါမှမဟုတ်လပြည့်နေ့မှာရလာတဲ့ငွေစက္ကူတွေဟာကံကောင်းစေတဲ့ လာဘ်ခေါ်ငွေပဲဖြစ်ပါတယ် (၄)မြန်မာ့အယူအဆမှာလျှာကိုက်မိရင်တစ်ယောက်ယောက်ကကိုယ့်အကြောင်းအတင်းတွေပြောနေပြီလို့ ယူဆကြတာ ရှိသလို နိုင်ငံတကာမှာလည်း နားယားရင် အတင်းပြောခံနေရပြီလို့ ယူဆကြတာမျိုးရှိနေပါတယ်ဘယ်ဘက်နား ယားရင်ကိုယ့်အကြောင်းအကောင်းပြောတာဖြစ်ပြီးညာဘက်နား ယားရင်တော့ […]
ဒီနေရာ(၇)ခုမှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝလက်လွှတ်မခံပါနဲ့
ဒီနေရာ(၇)ခုမှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံပါနဲ့ မှဲ့ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိ တတ်ကြပါတယ်။ မှဲ့ တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုစီရှိပါတယ်လို့ မှဲ့ပညာရှင်တွေကဆိုထားကြပါတယ် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ မှဲ့တွေရှိနိုင်ပြီးအခုဖော်ပြပေးမယ့် နေရာတွေမှာရှိတဲ့ မှဲ့တွေကတော့ ကံကောင်းခြင်းနဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကြွယ်ဝခြင်းကို ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းအပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့မှဲ့အရမ်းကို ကောင်းတဲ့မှဲ့ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရွယ်တူတန်းတူတွေထက်ငွေကြေး၊အောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိတတ်တဲ့မှဲ့လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ဒီလိုမှဲ့ပိုင်ရှင်တွေက ခေါင်းနည်းနည်းမာတဲ့ သဘာဝရှိပေမဲ့ […]